Indica mbeu | MyWeedSeeds.com
Iyi sarudzo yembeu ine yakachena Indica mbanje maronda.
Mbanje inogona kusiyaniswa mumhando mbiri, sativa uye indica mbanje. Hunhu hwechiratidzo chembanje chirimwa ipfupi uye chakabatikana nemashizha akasviba akasvibira fan. Chirimwa chembanje mbanje chine hupenyu hupfupi kusvika pamatanho uye hwakaomarara. Inochinja zvirinani munzvimbo dzinotonhora uye kazhinji zviri nani kuramba kurwisa tupukanana neforoma. Indica mbanje inoburitsa yakakwira THC mazinga, goho rakakura uye yakasimba matombo akakwira manzwiro. Mukusarudza uku uchawana yakanakisa indica Mbeu dzeMbanje dzine mukurumbira wakanaka wegoho.
More info autoflowerVakadzi NEW!
Bianca Feminized mhodzi
Huru Nhema Indica Yakafemerwa
Charas mbanje mbanje
More info autoflowerVakadziNEW!
Mbeu dzeCitral mbanje
Mbeu dzeRoto dzaGanesha
Chiedza chekuchamhembe XTRM chikadzi
Chiedza chekuchamhembe XTRM mbeu
Chiedza chekuchamhembe x Big Bud